Taariikhda My Butros » 6 Talooyin Si aad uga hortagto in taariikhda First ka mid noqdo Your hore
6 Talooyin Si aad uga hortagto in taariikhda First ka mid noqdo Your hore
Taariikhaha First. Waxaan si hammuun rajayn Daqiiqado sixir. Waxay noqon karaan exhilarating, oo weli handadaad. Siyaabo badan, ay tahay wax u dhigma ee waraysiyada shaqada. waxaa ACE, oo waxaad u hormarsataan in dhaaf mustaqbalka eegi kartaa, dhiirigelinta, iyo kor u qaadida danbeyn. (Yeyna ee rajeynayaa wanaagsan "dib u eegista waxqabadka" a.)
Dhinaca kale, xirtaan lebbisan qaldan, isgaadhsiin bidxeed, ama u muuqdaan in ay in ay haybiyaan aasaasiga ah ee bulshada ka maqnaato, iyo haddii aad ilowdo lagu magacaabo dib uu horay u socdo.
Yeyna ee ay wajahayaan: tartanka noqon kartaa kulul ee labada goobaha.
Halkan waxaa ku qoran 6 dhaqanka waxaad u baahan tihiin in ay qaataan sida "Nidaamka Operating Standard" waayo, taariikhda ugu horeysay dhan-muhiim.
1. Weeraryahanka saar aad cagta ugu fiican.
Wakhtiga. Dharka ee guusha. Heeyso taleefanka gacanta aad ka yar Faah Faahin. Wax uu noqon karaa mid carqalad ama niyad intii adigoo telefoon baxaan si joogto ah inta lagu guda jiro cuntada ka. Haddii aad qaadato call a ka qof, (sababtoo ah waa muhiim) isku day in aad u kooban– la raali.
Xusuusnow in "marnaba inaad fursad u hesho labaad si aad u aragti ah marka hore."
2. Ahow dhegeyste wanaagsan.
Tani waa markii u lahayn in ay cunto iyo wadahadalka doofaar.
Qaado xiiso firfircoon inuu barto qofka kale. La wadaag ah wax ama laba ku saabsan qofka aad tahay iyo waxa aad dareensan tahay si gaar ah aad ka dhigaysa aad. Iska ilaali weydiinaya su'aalo oo adag.
3. Had iyo jeer ku haboon.
Xusuusnow, Ujeedada halkaan ay tahay in ay garab istaagaan si ka wanaagsan.
Ha canaan ku saabsan ee la soo dhaafay ku fashilantay xiriirka, sheegi kaftanka off midab, ama u dhaqmaan jeedin in adeeg bixiyayaasha. Waxaa laga yaabaa inuu si aad soo gaarto sida booskooda.
4. Mushaharka in luqadda jidhka dareenka.
Ma ogtahay in 93% ee isgaarsiinta ayaa la sheegay in non-verbal?
Waxyaabaha sida idinkoo Sujuudsan, iyo wejiga,, xiriirka indhaha iyo qaabkaaga jirka kaa caawin kara inaad si ay u qiimeeyaan haddii aad taariikhda ayaa ku hawlan oo xiiso, ama rajeynaya aad waayi doonaa tiradooda. Halmaansan Aayaadkannaga ee.
5. Ha tegin "Dutch!"
Finance waa in aan marnaba iman ka hor hindiga taariikhda ugu horeysay. Iyo cheapness waa jeedo-off la hubo inta badan dadka. Haddii aad tahay qof caddaan ah loolan, noqon hal abuur leh; tixgelin guriga cunto macaan kariyay Candlelight iyo music.
6. End on warka wanaagsan.
Naxariiso. Haddii aad waqti wanaagsan, saas ha odhan. Meelaha laga baxo sida ay muhiim u bilaabo.
Raac lix talooyin waqtiyaysan si loo sameeyo heerka ugu horreeya ee taariikhda ugu horeysa ee aad!
Waxa kaliya ayaa laga yaabaa in bilowga gaar ah wax.